मधुमेह रोग र यौनेच्छा - यौन जिज्ञासा र समाधान - साप्ताहिक
म ५३ वर्षीय विवाहित पुरुष हुँ । आजभन्दा २५ वर्षअघि मेरो विवाह भएको थियो । यसबीच चार वर्षदेखि मधुमेह बाट पीडित छु । यद्यपि मेरो रगतमा सुगरको लेभल सीमाभित्रै छ । मधुमेह लागेपछि यौनेच्छा सामान्यभन्दा कम हुन्छ भन्ने सुनिन्छ, तर मेरो हकमा त्यस्तो भएको छैन । यसको कारण के होला ?
पाको उमेरमा यौनेच्छा
उमेर बढ्दै जाँदा, युवावस्था सरह यौन क्रियाकलापलमा संलग्न हुन नसक्ने स्थिति सिर्जना हुन सक्छ । समयको गतिसँगै उमेर बढ्नु र त्यसका साथै शरीर अनि यसको कार्य सम्पादन क्षमतामा परिवर्तन आउनु सामान्य तथा निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो । यसको प्रभाव हाम्रो शरीरका सबै अङ्गप्रत्यङ्ग तथा कार्य क्षमता दुवैमा देखिन्छ । यौनसम्बन्धी कुरामा पनि यस्तो स्थिति देखा पर्न सक्छ । पुरुषहरूमा लिङ्ग उत्तेजनामा कठिनाइ हुने जस्ता कुरा देखिन्छन् । त्यसबाहेक कतिपय दीर्घरोग अनि त्यसको उपचार तथा अन्य समस्याका प्रभाव पनि यौन जीवनमा नकारात्मक रूपमा देखिन सक्छ, तर तपाईंको जिज्ञासा पढ्दा तपार्इंमा त्यस्तो स्थिति भएजस्तो लाग्दैन । वास्तवमा यसलाई निकै खुसीको कुरा मान्नुपर्छ ।
नकारात्मक असर पार्छ ?
सजिलो भाषामा भन्नुपर्दा मधुमेह भएका व्यक्तिको रगतमा चिनी (ग्लुकोज) को मात्रा बढी हुन्छ । यसरी रगतमा चिनीको मात्रा सामान्य भन्दा बढी भए त्यसले अनेकौं समस्या सिर्जना गर्न सक्छ र त्यसको प्रभाव यौनकार्यमा समेत पर्छ ।
लामो समयसम्म अनियन्त्रित रूपमा चिनीको मात्रा बढी भैरहे त्यसले रक्तनसा अनि स्नायुलाई हानि पुर्‍याउँछ । पछि गएर यसको नकारात्मक प्रभाव यौन उत्तेजना, महिलामा योनि रसाउने वा पुरुषको लिङ्ग उत्तेजनामा पर्छ । लिङ्गमा रगत भरिन ठीक समयमा नाइट्रिक एसिड नामको रसायन निस्कन्छ, जसले रक्तनसाका मांसपेशीलाई खुकुलो हुन रसायनिक सन्देश वाहकका रूपमा काम गर्छ । मधुमेहका कारणले रक्तनसा वा स्नायुमा खराबी आउँदा यसले राम्रोसँग कार्य
तपाईंलाई पक्कै थाहा होला, हामीमा यौनेच्छा जागृत गराउने रागरस टेस्टेस्टेरोन हो । माथि भनिएबाहेक मधुमेह भएका व्यक्तिमा टेस्टेस्टेरोन नामको यो पुरुष रागरसको मात्रामा पनि कमी आउँछ । यस्तो किन हुन्छ भन्ने पक्का थाहा नभए पनि प्रायश: मधुमेह भएका व्यक्तिमा मोटोपन बढी पाइन्छ । यस्ता व्यक्तिमा इस्ट्राडिओल अधिक मात्रामा हुन्छ भने त्यसले नयलबमयतचयउष्अ चभभिबकष्लन जयचmयलभ श्राव हुन रोक्छ, जसले टेस्टेस्टेरोन हार्मोनको मात्रामा कमी ल्याउँछ । अर्कातिर, मधुमेह भएका व्यक्तिमा जथउयतजबबिmष्अ(उष्तगष्तबचथ(बमचभलब िबहष्क को सञ्चालनमै केही गडबडी आउने भएकाले यस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने मानिन्छ ।
त्यसबाहेक मधुमेह भएका व्यक्तिमा अन्य कतिपय कारणले पनि यौन जीवनमा नकारात्मक असर परेको हुनसक्छ, जस्तै : उच्च रक्तचापको समस्या । उच्च रक्तचापले पनि रक्तनसामा हानि पुर्‍याउँछ । त्यसैगरी उनीहरूमा खराब किसिमको कोलेस्ट्रोलको मात्रा बढी भएको हुनसक्छ, जसले रक्तनसालाई साँघुरो बनाउन सक्छ । जीवनशैलीको कुरा गर्ने हो भने मधुमेह भएका कतिपय व्यक्तिले धूमपान गर्ने, खानाको सन्दर्भमा परहेज नगर्ने हुन सक्छ । धूमपानले स–साना रक्तनसामा रगतको प्रवाह कम गर्छ ।
अनियन्त्रित रूपमा चिनीको मात्रा कम वा बढी हुँदा थकाइ लागेजस्तो हुने वा जाँगर वा स्फूर्ति नहुने स्थिति हुन्छ, जसले यौन क्रियाकलामामा संलग्न हुने कुरामा नकारात्मक असर पार्छ । त्यसबाहेक मधुमेह भएको व्यक्तिमा आफ्नो स्वास्थ्यका सम्बन्धमा नकारात्मक भावना हुनसक्छ । कतिपयले चाहेर पनि आफ्नो जीवनशैलीमा परिवर्तन गर्न सकेका हुँदैनन् वा तौलको उचित व्यवस्था गर्न सकेका हुँदैनन् । यस्तो स्थितिले उसको आत्मसम्मानमै धक्का पुग्न सक्छ, जसले मधुमेह भएका व्यक्तिमा यौनेच्छामा वा यौन लगावलाई नकारात्मक असर पारिरहेका हुनसक्छ ।
किन यस्तो नभएको ?
आफूलाई मधुमेह भएको थाहा भएपछि यौनसम्बन्धी तथा अन्य कुरामा नकारात्मक असर परेर अङ्ग–प्रत्यङ्गमा गम्भीर खराबी आउन नदिन रगतमा चिनीको मात्रा नियन्त्रित राख्नुपर्छ । तपाईंले रगतमा चिनीको मात्रा सीमाभित्रै भएको कुरा गर्नुभएकाले उक्त काम गरि नै रहनुभएको देखिन्छ । चिनी, ग्लुकोजजस्ता वस्तुको प्रयोग एकदमै कम गर्ने वा गर्दै नगर्ने, चिल्लो पदार्थको सेवन कम गर्ने, तौल ठिक्क राख्ने, नियमित व्यायाम गर्ने तथा प्रशस्त हरियो सागपात आदि सेवन गर्नुपर्छ । त्यसका साथै धूम्रपान तथा मद्यपान सेवनबाट परहेज अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो । औषधी प्रयोग गरिरहनुभएको भए औषधी नियमित रूपमा सेवन गर्नुपर्छ र नियमित रूपमा चिकित्सकवाट परीक्षण पनि गराउनुपर्छ । ह्दयरोग होस् वा कोलेस्टेरोल बढी हुने समस्या, त्यस्ता रोगको पनि नियमित परीक्षण तथा औषधी सेवन गर्न पनि बिर्सनु हुँदैन । यस्ता कुरामा ध्यान दिन सकियो भने मधुमेहको जटिलताबाट जोगिन सकिन्छ ।
तपाईंको सन्दर्भका यौनेच्छा तथा यौनजीवनमा असर किन नभएको होला भन्दा तपाईंले रगतमा चिनीको मात्रा सीमाभित्रै राख्नुभएदेखि जीवनशैली पनि स्वस्थकर अपनाउनुभएको हुनसक्छ । यी सब कारणले तपाईंमा यौनेच्छा जगाउने टेस्टेस्टेरोनको मात्रामा पनि कमी नआएको हुनुपर्छ र त्यसका साथै तपार्इंको रक्त नसा तथा स्नायुमा पनि कुनै नकारात्मक असर नपरेको देखिन्छ ।
मेरो विचारमा तपार्इंमा यी शारीरिक पक्षबाहेक मानसिक पक्ष पनि बलियो हुनुपर्छ । मधुमेहबाहेक उमेरले यौन सक्षमतामा ल्याउने नकारात्मकतालाई पनि तपार्इंले आफूमाथि हाबी हुन दिनुभएको छैन भन्ने मान्छु । तपार्इंको यौनप्रतिको सोच सकारात्मक र श्रीमतीसँगको सम्बन्ध सुमधुर हुनुले समेत यसमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुनुपर्छ ।